Isikhokelo esisebenzayo sendlela yokusebenzisa i-HTCdev | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | nokuVavanyelwa, Tutorials
Kule posi ilandelayo ixhaswe ngu uqeqesho lwevidiyo, Ndiza kukubonisa indlela yokusebenzisa iifayile ze Ifayile yeHTCdev, iphepha lewebhu elisinika ngendlela simahla, izixhobo ekufuneka uzenzile vula i-bootloader yenani leeterminal zeHTC.
Ukongeza, kweli phepha siya kufumana imiyalelo eneenkcukacha ukufumana umsebenzi wokuvula ifayile ye- bootloader ukusuka kwiiterminal ezininzi.
1 Iimfuno eziyimfuneko
2 Iingcebiso zokuqwalaselwa
2.1 Izixhobo ezifunekayo
Okokuqala bhalisa kwiwebhusayithi yeHTCdev y Cofa ukuze uqinisekise kwi ikhonkco ithunyelwe kwi-imeyile yakho.
Yiba nesiphelo sendlela I-HTC ehambelanayo Uluhlu lwezixhobo oza kuzifumana kwiwebhusayithi esemthethweni ye- Ifayile yeHTCdevNgokukwanjalo kufuneka ube nawo ukulungiswa kwe-usb kuvunyelwe, olu khetho lunokufumaneka kwimenyu yesethingi yesixhobo kwicandelo izicelo / uphuhliso.
Ibhetri yesixhobo ukuvula i-bootloader ayinakubanakho ungaze ube ngaphantsi kwe-30%, kuba ngenxa yezizathu zokhuseleko inkqubo ejongene nayo vula i-bootloader ayizukuvumela ukuba uqale inkqubo.
Landela lonke icebiso elivela kwividiyo nakwiziko lewebhu le- Ifayile yeHTCdev, ukuba ngesiNgesi, ukuba kukho into ongayiqondiyo, ungasebenzisa Umguquleli weGoogle ngokusebenzisa ikopi yokuncamathisela, ukuguqulela umxholo.
Ukuba ngexesha lenkqubo iyavula wena unqamle iselfowuni, Ifayile yeHTCdev Kuyacetyiswa ukuba uphume ngokupheleleyo kwinkqubo yokufaka, unqamle intambo ye-USB kwikhompyuter kwaye ulinde imizuzwana embalwa, emva koko uphinde usebenze kwakhona kwaye uqalise inkqubo kwakhona.
Ukuba eli linge lesibini liyasilela kwakhona, kufanelekile faka kwakhona abaqhubi be nokuVavanyelwa ngokufaka Ukuhambelana.
Uxhaswa njani apha unayo isifundo sichazwe ngokweenkcukacha kwaye ixhaswe ngokomzobo nge isikrini yenkqubo eza kwenziwa.
Uyifakile I-SDK ye-Android, iJava JRE y I-HTCsync, kunjalo kubalulekile ukuhlangabezana nezi mfuno zintathu ngaphambi kokuqala inkqubo yokuvula i-bootloader, kuba ukuba awuyi kuba neengxaki eziphindaphindiweyo kwaye ukuvulwa akuyi kugqitywa.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyivula njani i-bootloader yenani leeterminal zeHTC ngeHTCdev, Uyivula njani i-bootloader yeziphelo ze-HTC usebenzisa i-HTCdev
Khuphela - I-SDK ye-Android, iJava JRE y I-HTCsync
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » Isikhokelo somsebenzisi seHTCdev
Enkosi ngesikhokelo, kodwa umbuzo omnye, ngaba ukuvula i-bootloader kukwenza ulahlekelwe sisiqinisekiso sefowuni?
Ewe mhlobo ngesiqhelo unje
isergio mtz sitsho
amigooooo ndiyaphambana, ikhowudi yokuvula eza kum ngeposi ayivuli. Ndiza kunceda ukuyivula .. Ndikwi-mac
Phendula kwi-sergio mtz
Ungavumelanisa njani izixhobo ze-Android nge iTunes